17.8 tapitrisa dolara ny vidiny raha hanadio ny valan-javaboary lehibe indrindra eran-tany
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » 17.8 tapitrisa dolara ny vidiny raha hanadio ny valan-javaboary lehibe indrindra eran-tany
Fanjakan'ny Ranomasimbe Chimelong, tombanana ho 17.8 tapitrisa dolara hanadio
Mba hanadiovana ireo valan-javaboary lohahevitra folo lehibe indrindra eto an-tany, dia handoavana 36.4 tapitrisa dolara sy famafana 42 tapitrisa
Ny valan-javaboary lohahevitra priciest tokony diovina dia Fanjakan'ny ranomasina Chimelong any Shina - mitaky 20.7 tapitrisa hamafana bakteria
Ny faharoa dia ny Disney World Florida, mitaky famafana bakteria 7.2 tapitrisa
Eo amin'ny laharana fahatelo dia Shanghai Disney Resort ary Disneyland Paris fahefatra
Miakatra 65% ny zanabola ao anatin'ny telo volana lasa, faly ny olona iray andro iray toy ny mandeha any amin'ny valan-javaboary rehefa mora ny fameperana.
Ireo valan-javaboary misy lohahevitra dia tsy maintsy miomana amin'ny fisokafany indray, fa tsy maintsy miantoka ihany koa izy ireo fa diovina hatrany ambony ka hatrany ambany, izay tsy zavatra kely.
Ka ohatrinona izao ny zava-bita iray, ary ohatrinona ny vidiny? Ireo manam-pahaizana momba ny indostria dia nibontsina ny isa mba hahitana ny vidin'ny fanadiovana ireo valan-javaboary lohahevitra lehibe indrindra manerantany!
Voalohany indrindra dia ny fanjakana Ch Oceanong Ocean, tombanana ho 17.8 tapitrisa dolara hanadio. 20.72km lehibe2 Ny fitsangantsanganana any Zhuhai, Sina, dia mitaingin-tsoavaly maro isan-karazany sy fampisehoana ary izy io no faritry ny ranomasina lehibe indrindra. Tsy izany ihany fa ny mpanao fandinihana dia nanisa fa tokony ho 20.7 tapitrisa ny famafana bakteria hamonoana otrikaretina - azo antoka fa izany dia fanampiny iray hafa amin'ny fijoroana 5 Guinness World Record an'ny resort.
Amin'ny toerana faharoa dia World Disney any Florida, mitentina $ 6.2 tapitrisa sy hamafana bakteria 7.2 tapitrisa hanamboarana COVID-friendly. Raha ny fikarohana natao dia 30x eo ho eo ny vidiny noho ny fanadiovana ny tranon'i Drake mandritra ny herintaona!
The Disney Resort any Shanghai, Paris ary Kalifornia no miatrika ny laharana fahatelo, fahefatra ary fahadimy. Ny fanjakana mazika any Shanghai dia mitentina eo amin'ny $ 3.3 tapitrisa (mamafa 3.8 tapitrisa), Disneyland Paris hamerina ny tompony hamidy $ 1.7 tapitrisa sy 2 tapitrisa hamafana, ary ny Disneyland Resort any California dia hosaziana amin'ny $ 1.6 tapitrisa sy soloina 1.8 tapitrisa mba hadio.
Ary farany misy mpitsidika 11 tapitrisa mahery isan-taona, farany fa tsy ny kely indrindra dia ny Universal Studios any Osaka, Japon. Ny velarantanin'ilay zaridaina 130 hektara dia mbola mitentina famafana $ 536,042.29 ary famafana 622,494 hodiovina.